Ururka SOLJA iyo Telesom oo qabtay Tababar la xidhiida Anshaxa saxaafada ee Bisha Ramadaan + SAWIRO. |
Ururka SOLJA iyo Telesom oo qabtay Tababar la xidhiida Anshaxa saxaafada ee Bisha Ramadaan + SAWIRO.
Hargeysa (GNN) – Tababar uu soo qaban-qaabiyey ururka Saxaafadda Somaliland ee SOLJA oo ay maal-galisay shirkadda isgaadhsiinta Telesom ayaa maanta lagu qabtay huteel Safaari ee magaalada Hargeysa.
Furitaanka tababarkan waxaa ka soo qayb-galay Wasiirka Warfaafinta, Wacyi-galinta iyo Dhaqanka Somaliland Md. Cabdilaahi Maxamed Cukuse, Agaasimaha Qaybta Horumarinta Arimaha Bulshadda ee Shirkadda Telesom Md. Cabdiwahaab Maax, Gudoomiyaha SOLJA Maxamud Cabdi Jaamac (Xuuto), Tababarayaashii tababarkan bixinaayey iyo ku dhawaad 100 saxafi oo ka kala socday warbaahinta kala duwan ee dalka.
Ugu horayn waxaa kulankan ka hadlay Sheekh Almis Yaxye waxaanu warbaahinta u jeediyey wacdi dhinacyo badan taabanaayey. Sheekha ayaa sheegay in qofka saxafiga ahi uu ogsoonaado in kalmadd kasta oo uu qori, ama sheego ama uu baahiyo ay qorayaan laba malag, sidaasi daraadeed wuxuu warbaahinta xasuusiyey in rasuulkeenu CSW qofka Muslimka faray in aan la faafin ceebaha qofka Muslimka ah. Sheekha ayaa warbaahinta u sheegay in ay ku dadaalaan sidii ay umadda wax faa’iido u leh ugu sheegaan.
Sheekh Almis ayaa intaasi ku daray in uu warbaahinta si dhow ula socdo subaxkasta uu akhriyo wararka ka soo baxay dhamaan wargeysyadda dalka sidoo kale wararka mareegaha akhriso. Sheekha ayaa sheegay daraasad ay sameeyeen in ay ku ogaaden in dhamaan siyaasiyiinta dalka ay tiradoodu dhan tahay 200 oo siyaasi kuwaasi oo ay dhamaan warbaahinta warkooda soo celceliyaan, sheekha ayaa ugu baaqay warbaahinta in ay saddex milyan iyo badh (3.5 Milyan) kale ee reer Somaliland ay warkooda sheegaan oo ay ka waramayaa arimaha bulshadda dantu ugu jirto.
Kulan waxaa isaguna ka hadlay Agaasimaha Qaybta Horumarinta Arimaha Bulshadda ee Shirkadda Telesom Md. Cabdiwahaab Maax waxaanu sheegay in shirkadda Telesom ay hore SOLJA ugu deeqday qalab koombuyuutaro ah. Tababarkan maanta ee ay maali-galisay shirkaddu ee Anshaxa Saxaafadda uu ka mid yahay balan-qaadii ay hore shirkaddu ugu samaysay SOLJA. Muddane Cabdiwahaab ayaa warbaahinta u sheegay in ay ku dadaalaan sidii ay bulshadda ugu sheegin lahaayeen war bulshadda wax tar u leh. Waxaanu ku dhiiri-galiyey in saxafiyiintu ay ku dadaalaan inay muujiyaan masuuliyadda bulshadda oo marka ay warka qorayaan ama baahinayaan war haddii xitaa uu yahay war rurn ah oo sax ah waa in ay ka fikiraa baahintiisa dhibta ka dhalan karta inta ay leekaan karto.
Gudoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA Md. Maxamud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa isna ugu horayn u mahadnaqay shirkadda Telesom maal-galinta tababarkan Anshaxa Saxaafadda ee Bisha Ramadaan. Gudoomiye Xuuto ayaa tibaaxay intii ay xilka SOLJA la wareegeen in ay yaraatay xadhiigi loo gaysan jiray saxaafadda arintaasina wuxuu uga mahadnaqay xukuumadda oo uu sheegay inay si fiican ugala shaqaysay.
Gudoomiye Xuuto ayaa mahadnaq u jeediyey qaar ka mid ah warbaahinta oo weeraray siyaasiyiinta caan ah kuwaasi oo ay markii dambe raali-galin ka bixiyeen. Gudoomiyaha ayaa ugu dambayntii xukuumadda dhexe ka codsaday in ay SOLJA ugu deeqaan dhul ku yaala magaalada badhtankeeda kaasi oo ay saxaafaddu soo wadda gaadhi karto, waxaanu sheegay dhulkii ay dawladda hoose ugu deeqday in loo sameeyo warbaahinta inuu yahay dhul ka fog magaalada Badhtankeeda oo aanu warbaahinta inteeda badan gaadhi karin.
Gudoomiyaha SOLJA ayaa ugu dambayntii tusaale u soo qaatay mid ka mid ah mareegaha dalka ka jira, mareegtaasi oo shirkad ugu hanjabtay inay sumcadadeeda dhulka la gali doonto maadaama ay wadda shaqayn yeelan waayeen. Shabakadaasi ayaa si ka baxsan anshaha Saxaafadda waxa ay hanjabaaday aanay waxba la hadhin oo ay sheegatay in xataa haddii shabakadooda la xidho inay leeyihiin shabakado badan soo galin doonaan warkaasi sidoo kalena ay dalka dibadiisa ka soo galin karaa wararka ka dhan ah ee shirkadda baada kaga doonayeen.
Wasiirka Warfaafinta Somaliland Md. Cabdilaah Maxamed Cukuse oo shirkaasi si rasmi ah u furay tababarka Anshaxa Saxaafadda Bisha Ramadaan ayaa warbaahinta ugu baaqay in saxafiga aanu wax xun caan ku noqon ee uu wax wanaagsan uu caan ku noqdo. Wasiirka ayaa amaanay qaar ka mid ah dhalinyaradda warbaahinta kuwaasi oo uu sheegay inay yihiin saxafiyiin mustaqbal fiican ku dhex leh saxaafadda, waxaana ragaasi ka mid ahaa Barkhad Kaariye oo VOA u shaqeeya, Maxamed Boosh oo HCTV ah, Saleebaan oo wargeyska saxansaxo ah, wariye ka hawl-gala shabakadda Toggaherer iyo Wariye Khadar Maxamed Cakule.
Wasiir Cabdilaahi Cukuse ayaa sidoo kale Amaanay hablaha wariyayaasha ah kuwaasi oo uu ku amaanay in ay yihiin hablo shaqadda ku fiican kuwaasi oo aan maalin kaliya lagu araga inan wariye ah oo qof ama shirkadda ceebaynaysa.
Wasiirka ayaa ugu dambayntii balan-qaaday in ururka Saxaafadda Somaliland ee SOLJA sida ugu dhakhso badan ay uga jawaabi doonaan dalabkooda ah in dhul magaalada badhtankeeda ah la siiyo, balse waxaa uu shardi ka dhigay in ay SOLJA diwaan-galiso saxafiyiinta dalka ka hawl-gala oo dhamaystiran si loo ogaado inta saxafi ee dalka ka hawl-gala loona aqoonsan karo qofka saxafiga ah warbaahintu ka hawl-galo.
Tababarkan waxaa ugu dambayntii si isdaba jooga ah saddex maduuc uu kala galay tababarayaashii tababarka daadihinaayey. Tababarka koowaad oo ka ku saabsanaa Anshaxa Saxaafadda waxaa ka hadlay aqoonyahan Xasan Cabdilaahi Maxamed waxaanu Carabaabay Anshaxa suuban ee looga baahan yahay in qofka saxafiga ahi uu ku dhaqmo, sidoo kale waxaa uu ka hadlay sida wax looga qabto mareegaha anshaxa xumadda kula kaca qof ama shirkadda, waxaanu xusay in ay laba hab loo xidho in shirkadda Isgaadhsiinta bixiya laga xidho iyo in shirkadda hosting-ka siisay laga ashkateeyo sidaana la iskaga xidhi karo.
Mawduuca labaad waxaa bixiyey Wariyaha rug cadaaga ah ee Yoonis Cali Nuur. Madwuucan ayaa ahaaMasuuliyadda Saaray Maamulayaasha iyo Tifatirayaasha Warbaahinta, mawduucan ayaa si qoto dheer loogu sharaxay in masuuliyadda kowaad ay saaran tahay masuulka warbaahinta loogana baahan yahay in uu la socdo waxa ay warbaahintiisu baahinayso. Mawduucan ayaa si mugle uu Yoonis Cali Nuur ugu falanqeeya shaqooyinka looga baahan yahay masuulka iyo tifatiraha, waxa ka reeban iyo sida haboon ee looga baahan yahay wariyaha.
Mawduuca saddexaad waxaa jeediyey Barkhad Maxamud Kaariye oo ah aqoonyahan iyo wariye ka tirsan Laanta Afka Somaliga ee VOA-da. Mawduucan ayuu diiradda ku saaray Xeerka Saxaafadda Somaliland ee xeer No. 27/2004 xeerkan oo uu sheegay inuu ku diyaariyey cilmi-baadhistiisii degree kowaad ee Jaamacadda. Waxaanay sharaxaad ka bixiyey qodobadda 13, 14, 15 iyo 27 oo ah qodobo si gaar ah u sheegaya anshaxa looga baahan yahay qofka saxafigu inuu ilaaliyo si aanu xad-gudub ugu gaysan dadka iyo dalka.
Tababarkan waxaa soo gunaanaday Gudoomiyaha SOLJA Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxaanu sheegay in tababarkan ujeeddada laga lahaa ay ahayd sidii loo kobcin lahaa aqoonta saxaafadda ee dhinaca Anshaha. Gudoomiya ayaa sheegay in labada dhibaato ee ugu waweyn ee saxaafadda haystaa ay tahay Dhaqaalaha iyo aqoonta saxaafada ee dhinaca Anshaxa oo liidata, waxaanu balan-qaaday in waddi doonaan tababaradda lagu dhisaayo aqoonta saxaafadda. Waxa uu shirkadda Telesom iyo Shirkaddaha kaleba ugu baaqay inay kala qayb-qaataan sidii loo kobcin lahaa aqoonta saxaafadda dalka.